'भाटभटेनीको जागिर गयो, अहिले बालुवा चाल्छु' | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
‘भाटभटेनीको जागिर गयो, अहिले बालुवा चाल्छु’
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:५२
मेरो घर ओखलढुंगा हो । १७ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो कलिलै उमेरमा पारिवारिक जिम्मेवारी थपियो । वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको केही वर्षको अन्तरालमा तीन छोरी जन्मिए ।
विवाह हुनुअघि गाउँमै जसोतसो जीविका चलिरहेको थियो। परिवारमा सदस्य थपिए, खर्च पनि बढ्यो । विदेशिनुबाहेक विकल्प देखिनँ । देशको अवस्था थाहा नै छ, यस्तो अवस्थामा दिमागमा आउने भनेको वैदेशिक रोजगारी नै त हो !
आर्थिक भार बढ्दै गएपछि घरमा वृद्ध बुबा, तीन छोरी र श्रीमती छोडेर कुवेत गएँ । ती साना नानीहरूलाई छोडेर जाँदा मेरो हालत खराब भएको थियो, म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ । खाडी मुलुक, गर्मी उस्तै, पहाडी भेगमा बसेको मजस्तो मान्छेलाई बसिसक्नु थिएन । अझ घरपरिवारको सम्झनाले उस्तै सताउने । के गर्नु रहरभन्दा ठूलो बाध्यता हुँदो रहेछ ।
विदेश गएको सुरुको वर्ष त पैसा आफ्नै खातामा राख्थेँ । श्रीमतीलाई अड्कलेर घर खर्च पठाउँथे । किनभने सबै पैसा श्रीमतीको नाममै गरिदिन विश्वास लागिहालेको अवस्था थिएन । बाँकी पैसा आफ्नै खातामा हुन्थ्यो ।
समय बित्दै गयो । छोरीहरूलाई राम्ररी पढाउनुपर्छ, ठूलो मान्छे बनाउनुपर्छ भन्थिन् उनले । उनको पनि लाऊँ खाऊँ भन्ने नै उमेर थियो । उताबाट मैले उनलाई मन लागेको काममा खर्च गर भन्थेँ । पैसा बचाउनुपर्छ भन्दै टार्थिन् । कुरो सुन्दा व्यावहारिक लाग्न थाल्यो । यता मेरो मनमा व्यर्थै श्रीमतीलाई यसरी पैसाको मामलामा शंका गरेछु भन्ने पश्चत्ताप पनि भयो । अब कमाएको सबै पैसा उसैलाई जान्थ्यो ।
कुवेतमा चार वर्ष काम गरेपछि त्यतैबाट दुबई हानिएँ । कमाइ र अवसर कुवेतमा भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले त्यहाँ पुर्‍यायो । अलिअलि कमाइ हुँदै गएपछि लोभ पनि बढ्दो रहेछ । दुबईमा आठ वर्ष बिताइयो ।
हामी जस्ता मजदुरले के नै काम पाउँछौं र हजुर, उही त हो । घर बनाउने, ट्वाइलेट सफा गर्ने, पछि प्लम्बरको काम सिकियो, त्यसपछि त्यही कामलाई नै निरन्तरता दिएँ । कुवेत र दुबईमा गरेर विदेशमा १२ वर्ष बिताएँ । कमाइ त्यस्तै २३ लाख भएको थियो ।
त्यतिबेलै नेपालमा महाभूकम्प आयो । समाचार विश्वभर फैलियो । जताततै घर भत्किएका, मान्छे पुरिएका फोटो, भिडियो समाचारमा आउँदा मनै खिन्न हुने । मलाई पनि परिवारको चिन्ताले सतायो । दुबई बसेको आठ वर्षपछि घर फर्कने निर्णय गरेँ ।
घरपरिवारसँग भेट्ने कुराले म फुरुङ थिएँ । परिवारका सबै सदस्यका लागि कपडा, घरका लागि अत्यावश्यक पर्ने केही सामग्री, गाउँघरमा बाँड्न मिठाई किनेँ । श्रीमतीका लागि बहुमूल्य पर्ने वस्तु किन्न नसके पनि साडी र मेकअपका सामान किनिदिएँ ।
तर, नियतिलाई यो सब मञ्जुर थिएन ।
घरमा अब नेपाल फर्कन्छु भनेको भोलिपल्ट बिहान धर्तीमा उज्यालो छाउन नपाउँदै मेरो जिन्दगीमा अन्धकार छायो । घर आउने तयारीमा लाग्दा बुबाको फोन आयो । बुबाले दिनुभएको खबरले नै म अवाक् भएँ । म नेपाल आउँछु भनेपछि तीन छोरी छोडेर श्रीमती सबै पैसा लिएर अर्कैसँग भागिछन् ।
त्यतिबेला जेठी छोरी १५ वर्षकी, माइली १४ र कान्छी छोरी १३ वर्षका थिए । छोरीहरुको बिचल्ली हुने पिरले सतायो । त्यति मात्र कहाँ हो र ? १२ वर्ष खाडीमा गरेको दुःख छिनभरमै गायब भएको थियो । भाग्यले लात हानेको समय थियो त्यो ।
कति दिन त रोएरै बिते । साथीहरूले सम्झाउन खोज्थे । तर, जति नै सम्झाए पनि मान्छेलाई आफ्नै दुःख ठूलो लाग्ने रहेछ । साथमा तीन छोरीलाई हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारीले धेरै समय दुःख मानेर बस्न सकिनँ । केही सीप नलाग्ने भएपछि कानुनको सहारा लिएँ । श्रीमतीलाई मुद्दा हालेँ । यो कानुनी लफडामा पर्दा उल्टो चार लाख रुपैयाँ खेर गयो । हातमा भने केही लागेन ।
पैसासहित मलाई घर न घाटको बनाएर जाने श्रीमती कहाँ हो भनेर अहिलेसम्म पनि पत्ता लागिसकेको छैन । व्यर्थको झमेलामा फसेँ । उता पुर्ख्यौली घर सदरमुकाममै पर्छ । घरमा वृद्ध बाबुसँग माइली छोरी बस्दै आएकी छिन् । जेठी र कान्छी छोरी मूलपानीको एक सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् ।
छोरीकै लागि भनेर त्यत्रो दुःख गरेर पैसा जुटाएको थिएँ । अहिले सरकारी विद्यालय पठाउनु पर्दा बित्यास लागेर आउँछ । फेरि पुराना दिन सम्झिएर पनि हुने केही रहेनछ भन्ने लाग्छ । तर, घाउको खोट त मनमा गढेकै छ नि । त्यही पीडाको कुण्डबाट बाहिर निस्कन नसकेर हो उता घर (ओखलढुंगा) जान मन लाग्दैन । त्यता भएको जायजेथा पनि सबै आफन्त पर्ने भाइलाई जिम्मा लगाएको छु । आफू उतै गएँ भने उही पुराना कुराले सताउँछ, गाउँलेको बिचराको पात्र बन्छु । त्योभन्दा त बरु नजानु नै बेस ठानेको छु ।
जेठी श्रीमतीले छोडेपछि मैले तीन वर्षअघि दोस्रो विवाह गरेँ । कान्छी श्रीमतीबाट अर्की छोरीको जन्म भयो । अहिले नानी दुई वर्ष पुग्न लागिन् । दोस्रो विवाह पनि श्रीमतीलाई पुरानो विवाह र बालबच्चाबारे केही सुइँको नदिइ ढाँटेर गरेँ । सत्य कुरा भनेको भए कहाँ बिहे हुन्थ्यो र ? गाह्रो छ नि । विवाह त नगरी नहुने थ्यो । अहिले तीन छोरी र श्रीमतीसहित मूलपानीमा बस्दै आएको छु । महिनाको तीन हजार कोठा भाडा तिर्छु । कान्छी श्रीमतीबाट पनि छोरी नै भयो । तर, छोराको इच्छा अझै छ । मरेपछि दागबत्ती दिने छोरोले हो ।
विदेशबाट आएपछि कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा काम गर्न थालेको थिएँ । सामानमा ट्याग लगाउने काम थियो । महिनाको २० हजार तलब बुझ्थेँ ।
काम गर्न थालेको पनि वर्ष दिन जति भएको थियो, कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो । हावाबाट पनि यो भाइरस सर्छ भन्ने सुनेँ । भाइरसबारे धेरै थरी हल्ला फैलिएको थियो । कसको कुरा पत्याउने भन्नेमै दोधार थियो मनमा । त्यत्तिकैमा यातायात पनि ठप्प भयो । त्यत्ति भएपछि काममा जान सकिनँ । हिँड्दै जान टाढा हुने । नियमित जान नसकेपछि काम छोडेँ । निकालिए नै भनुम् न । त्यसपछि त गर्जो टार्नै गाह्रो हुन थाल्यो । पानीसमेत किनेर खानुपर्ने काठमाडौंमा पैसाबिना एक मिनेट पनि कसरी टिक्न सक्नु ? उता घरबेटीको किचकिच उस्तै ।
श्रीमतीको पनि काम-धन्दा केही छैन । घरमा जहान परिवार मेरै आम्दानीमा टिक्दै आएको थियो । लकडाउन खुल्ने टुंगो थिएन । एक महिना पनि धान्न नसकिने स्थिति आएपछि काम नगरी नहुने बाध्यता भयो । घर नजिकैका एक जना दाजु घर बनाउने ठेकेदारको काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको पनि घर ओखलढुंगा । मैले आफ्नो समस्या बताएपछि घर बनाउने काममा लगाउने कुरा गर्नुभयो ।
काम गर्न जान थालेपछि भने घरबेटी शान्त भएका थिए । अहिले घर बनाउन बालुवा चाल्ने, गिट्टी बालुवा बोक्ने काम गर्छु । दिनमा ज्याला गरेबापत हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ । लकडाउनको यो खडेरीमा यत्ति कामले घरखर्च चलिरहेको छ । जागिर भएको भए ढुक्क हुने थियो । यो ज्याला मजदुरीको काम कति दिनसम्म पाउने हो थाहा छैन । अझै स्थिति पुरानै होला भन्ने पनि आश छैन ।
पहिलो श्रीमतीले त्यसरी धोका नदिएको भए पनि अहिले जीवनले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला । यो महामारीमा जोगाएर राखेको पैसाले केही त काम दिन्थ्यो सायद । अलिअलि बिर्सिसकको ती दिनलाई यो महामारीले फेरि एक पटक बिउँताइदिएको छ । सम्झँदा पनि छाती भत्भती पोलेर आउँछ । परिस्थितिले कहाँबाट कहाँ पुर्‍याउने रहेछ।